Ithegi: I-SurveyMonkey | Martech Zone
Xa ndisebenza kwiqonga eliphambili le-SaaS, enye indlela esebenzayo esasihambisa ngayo uhambo lwabathengi phambili yayikukuthumela isipho esikhethekileyo nesixabisekileyo kubathengi esijolise kubo. Ngelixa iindleko zentengiselwano zibiza, utyalo-mali lwalunembuyekezo entle kutyalo-mali. Ngohambo lweshishini ezantsi kunye nemicimbi irhoxisiwe, abathengisi baneendlela ezimbalwa zokufikelela kumathemba abo. Ungayichazanga eyokuba iinkampani ziqhuba ingxolo engaphezulu
I-CoffeeSender: Thumela iKhadi lesipho le-Starbucks ngokuchofoza kube kanye
Ngaphandle kwesilonda sam, ngubani ongayithandiyo i-Starbucks? Siye sabhala ngaphambili ngamanye amaxesha zizinto ezincinci ozenzayo ezinefuthe kakhulu. Kuba awukwazi ukujika kwiindawo ezininzi ngaphandle kokubona i-Starbucks, kwaye i-Starbucks iyafana neentlanganiso zeshishini, kubonakala kusengqiqweni ukuba kufuneka ube ne-app edityaniswe neCRM yakho apho unokukhahlela i $ 5 Starbucks® eGift Card nge imeyile. I-CoffeeSender yinkqubo evumayo
Kukho isaqhwithi kolundi kushishino lokuzenzekelayo. Izithintelo ekungeneni kwamaqonga amatsha ziba ezantsi nezisezantsi, amaqonga aqolileyo aginywa ngamaqonga okuthengisa amashishini, kwaye lawo aseleyo embindini akulwandle oluthile. Nokuba bayathandaza banokuxhomekeka kubathengi babo ukuze babonakale benomtsalane kumthengi, okanye kufuneka behlise amaxabiso abo - kakhulu. Ukuphazamisa omnye kumzi mveliso